Ebe nchekwa Foregram na-ebute | Rayson
Ebe nchekwa Foreling
Anyị na-ege ntị nke ọma chọrọ ihe ndị ahịa chọrọ ma na-echekwa ahụmịhe ndị ọrụ mgbe niile n'uche mgbe ị na-azụlite akwa food. A na-anakwere ihe eji eme ihe kwesiri ekwesi iji hụ n'ogo ngwaahịa na arụmọrụ ya kachasị gụnyere rayson. Na mgbakwunye, o nwere ọdịdị nke e mere iji duzie ụlọ ọrụ.
Jiri ebe nchekwa na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ndị ọrụ na-emepụta ihe, ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson nwere ike ichebe onwe ha, zụlite, na nwalee ihe niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere fop nchekwa anyị, kpọọ anyị ozugbo.
Rayson bụ ụlọ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ maka imeziwanye teknụzụ na-arụpụta na R & D Ike. Anyị na-akwado ya na igwe dị elu ma mekwaa ọtụtụ ngalaba iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ngalaba ọrụ anyị nke nwere ike inye ndị ahịa nwere ọrụ dị oke arụ ọrụ. Ndị otu ọrụ bụ njikere mgbe niile iji jee ozi ndị ahịa si mba dị iche iche na mpaghara dị iche iche, ma nwee njikere ịza ajụjụ niile. Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere azụmaahịa ma ọ bụ nwee mmasị na foam ebe nchekwa anyị, kpọtụrụ anyị.